China Earth auger mpanamboatra sy mpamatsy | Masinina Dongheng
Endri-javatra ny KINGER eto an-tany auger
KINGER Earth auger dia manana maodely miisa 25 manomboka amin'ny YDH mini ka hatramin'ny YDH150000, izay mety amin'ny mpamongady 0,8-50ton, steer skid ary backhoe loader sns
FANANTENANA SY FANOMPOANA
Fiantohana herintaona ho an'ny motera sy fiantohana 18 volana ho an'ny boaty.
Manome fanampiana ara-teknika sy serivisy an-tserasera izahay.
MOTOR HYDRAULIKA avo lenta
Ny fahombiazan'ny KINGER dia midika fa mandinika bebe kokoa isika mba hampivelatra ireo fitaovana azo antoka indrindra ho an'ny mpanjifa.
Ny fanodinana Gear dia mampiasa teknolojia fanodinana hafanana manokana, izay novolavolain'ny Doctor of the Tsinghua University.
SORATRA TSY Fanaparitahana
Tsy manam-paharoa amin'ny KINGER Earth auger, ny Non-Dislodgement Shaft dia zana-kazo iray tokana miangona avy any ambony ka mihidy ao anaty sosona fandavahana an-tany.
Ity famolavolana ity dia manome antoka fa tsy ho latsaka mihitsy ilay hazo-motera, afaka manamboatra tontolon'ny asa azo antoka kokoa ho an'ny mpandraharaha sy ny mpiasa manodidina azy koa, izay singa ilaina.
Ny seta manontolo dia misy ampahany 6 araka ny aseho etsy ambany:
Manana tokonana tokana, tokonana indroa ary famatorana fanamoriana izahay mba hampifandray ny mpamily KINGER auger amin'ny excavator / backhoe loader / skid steer sns.
Izahay koa dia manamboatra boribory auger sy bara fanitarana ny tenantsika. Misy 8mm, 10mm, 12mm ary 16mm hafa ny hatevin'ny sidina auger hihaona amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa samihafa. Ny halavan'ny fenitra dia 1.5m. Nefa manana halavirana 1m, 2m ary 2.5m koa izahay. Ny elatry ny savaivony dia avy amin'ny 100mmto 2000mm, azonay atao ny manamboatra araka izay ilainao.
Raha ny bara fanitarana, misy 1n, 1.5m, 2.5m, 3m samy hafa halava namboarina misy.
Ny savaivon'ny bara fanitarana dia 89mm, 108mm, 127mm ary 146mm.
Raha ny safidy nify no resahina dia manana nify fanapahana, nify boribory ary nify fisaka isika amin'ny toe-piainana samihafa. Ny nify boribory dia ampiasaina amin'ny tanimanga, tany feno fasika, tany mangatsiaka na vatokely kely. Ny nifify dia ampiasaina amin'ny tany mahazatra.
NY KINGER eto an-tany dia mihatra amin'ny herinaratra, ny ala, ny asa vaventy amin'ny fifandraisan-davitra, ny lalamby haingam-pandeha, ny fanaovan-tany, ny fambolena hazo, ny mankaleo, ny antontam-pitana, ny fametrahana vongan-tany, ny paompy hafanana avy any an-tany, ny fametrahana ny andry sy ny masira, ny fametahana angovo azo avy amin'ny masoandro, ny tetezana fandavahana pier sns.
KINGER Earth auger dia A \_ azo ampiharina amin'ny tany maro karazana, toy ny tany mangatsiaka, tany madio, tany malemy, tanimanga, fasika, fosilin'ny rivotra, ary koa vatokely, vatokely sns.
Nampiasainay ny verinia fanaovan-mofo ary nolokoina tsara ny lokon'ny loko nefa tsy nendahana. Ny faritra misarona dia tsaboina amin'ny fisorohana ny harafesina. Ny vokatra fanondranana dia fonosina amina tranga plywooden mba tsy hisy banga, harafesina ary fisehoan-javatra hafa mandritra ny fitaterana.
Ampiharo ny eritreritra manerantany momba ny fiarovana ny tontolo iainana, mampihena ny fampiasana plastika sy fitaovana fonosana hafa izay manimba tanteraka ny tontolo iainana.
Ny famaritana etsy ambony dia natao ho anao fotsiny, azonay atao ny mifanaraka amin'ny maodely mety arakaraka ny lanjan'ny excavator anao.
Previous: Tavoahangy mixer
Manaraka: MINI excavator